Qiimayn iyo Tafatirid Lagu Samaynayay Buugaag Loo Qoray Mashruuca WASH - Cakaara News
Qiimayn iyo Tafatirid Lagu Samaynayay Buugaag Loo Qoray Mashruuca WASH
Jigjiga (cakaaranews) Sabti 3da September 2016. Qiimayn iyo tafatirid uu soo agaasimay geedisocodka horumarinta manhajka, cilmibaadhista iyo qiimaynta ee xafiiska waxbarashada DDSI islamarkaana lagu qiimaynayay buug ay waaxdu u qortay mashruuca WASH ee ku qotama nadaafada biyaha iyo faayo dhawrka looguna talagalay dugsiyada deegaanka ayaa ka qabsoomay Hoolka Shirarka ee Xafiiska Waxbarashada DDSI.
Hadaba, tafatirida iyo qiimaynta buugta oo ay samaynayeen khabiiro laga soo kala xulay xafiiska waxbarashada, Biyaha Iyo Caafimaadka DDSI kaasoo socoday mudo 2 maalmood ah ayaa waxaa xidhitaankiisii kahadlay Agaasinka Horumarinta Manhajka, Cilmibaadhista iyo qiimaynta mudane Cabdulaahi idiris oo ugu horayn umahadceliyay dhamaan kaqaybgalayaasha qiimaynta buugaagtan ee kakala yimid xafiisyada kale duwan ee bahwadaagta ah iyo khabiiradii soo turjumay soona taftiray. Wuxuuna intaa kudaray in buugtan ay turjumeen khabiiro isku dhaf ah oo u badan xafiiska waxbarashada DDSI. Kadibna ay tafatireen khabiiro kale oo isla xafiiska ah tanina ay tahay qiimayntii ugu danbaysay ee buugaagta.
Wuxuuna agaasinku xusay in kaqaybgalayaashu ay sifiican usoo dhigeen wixii talo bixin ahaa ee buugtan lagu soodari lahaa ama laga reebi lahaa. Wuxuuna balan qaaday in lagu darayo dhamaan talo bixinada fiican ee ay soojeediyeen khabiiradu kadibna lasoo daabaci doono buugta oo labadiyay.
Sidookale, Sandheere Maxamed Xuseen oo kamid ahaa khabiiradii gacanta kuhayay buugta ayaa sheegay in buugtani ay tahay buugaag loogu talagalay gudiyada nadaafada iyo faayodhawrka dugsiyada gaar ahan dugsiyada uu ka shaqeeyo mashruuca WASH. Wuxuuna intaa kudaray in buugtan ay tahay buugaag faaiido badan u yeelan doonta ardayda dugsiyada iyo waliba bulshada inteeda kale. Kaalin wayna ay kaqadan ilaalinta nadaafada biyaha iyo faayo dhawrka.
Ugudanbayna waxaa iyana dareenkooda kahadlay khabiiradii kasoo qaybgashay qiimaynta buugta ee ka kala yimid xafiisyada ayaa sheegay in buugaagtan sifiican loo qoray loona tafatiray islamarkana ay dhankooda sifiican uga talo bixiyeen buugaagtii loo qaybiyay.